Jimcaha, Agoosto 22, 2014 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
MobileAppTracking waxay bixisaa SDK (Android ama iOS) si si fudud loogu dhexgeliyo warbixinta shabakad kasta oo xayeysiis ah ama lamaane daabacaadda qaab dhismeedkaaga horumarka. Marka SDK la isku daro, waxaad awood u leedahay inaad si firfircoon ula socotid dhacdooyinka ka socda lamaane dhinac saddexaad ah. MobileAppTracking kuma tiirsanaato UDID ahaan habka astaamaynta - waxay taageertaa dhowr nooc oo sifooyin ah oo u hoggaansamaya siyaasadaha dukaanka barnaamijka. Lasoco rakibida barnaamijka mobilada iyo kaqeybgalka isticmaalaha dib xayeysiintaada moobaylka ah
Iibinta arjigaaga moobiilku waa mug weyn, istiraatiijiyad qiimo-yar sidaa darteed helitaanka hoggaanno iyo hubinta hoggaamiyeyaashaas inay beddelaan, sii joogaan, oo ay u macaamilaan macaamiil ahaan. Jawiga suuq-geynta ee kanaallo badan, waxaa muhiim ah in la fahmo halka aad ka helayso tayada ugu wanaagsan ee maalgashiga. Taasi laguma cabbiro si fudud oo ah qarash-riix kasta - qiimaha noloshiisa macaamiisha guurguura waa in sidoo kale la fahmaa. Qiimaha macaamilka inta uu nool yahay (CLV ama CLTV), qiimaha macaamilka inta uu nool yahay (LCV), ama qiimaha nolosha qofka isticmaala (LTV)